Ergada ciyaaraha Olimbikada K/Woqooyi oo Koonfurta aad loogu soo dhaweeyay - BBC News Somali
Ergada ciyaaraha Olimbikada K/Woqooyi oo Koonfurta aad loogu soo dhaweeyay
9 Febraayo 2018
Magaalada Pyeongchang ee Kuuriyada Koonfureed waxaa ka furmay tartanka ciyaaraha Olimbikada waxaana kooxaha ka qeybgalaya ka mid ah kooxaha waddamada labada Kuuriya.
Labadani kooxood ayaa furitaanka ciyaarahani waxa ay siteen hal calan oo kaliya.
Dadka waxaa ku dhex jiray saraakiil sar-sare oo ka socotay Kuuriyada Woqooyi oo ay ahayd booqashadii u horeysay ee koofurta ay ku tageen tan iyo dagaalkii gacanka Kuuriya.
Madaxweynaha Kuuriayda Koonfureed ayay is-gacan-qaadeen gabadha ay walaalaha yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi.
Hase ahaatee marti qaad rasmi ahaa oo uu madaxweynaha Kuuriayda Koonfureed u sameeyey marti sharaftii ayaa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence wuxuu diiday in ay isku miis fariistaan ergadii ka socotay Kuuriyada Woqooyi.
Xafladda furitaanka oo ku beegantay xilli qabow ba'an oo aan caadi ahayn uu dhacaya ayaa munaasabadii waxay soo jiidatay dad fara badan oo mar kaliya u sara-kacay rayn rayn darteed markii la saaray calanka buluuga iyo cadaanka ah ee mideynta Kuuriya.
Tartanka xilliga qaboobaha ee ciyaaraha fudud ee Olimbikada wuxuu jimcihii si rasmi ah ugu furmay xaflad lagu soo bandhigay dab-rid indhasarcaad leh oo aad u qurux badan oo lagu ammaanay midnimada ay muujiyeen reer Kuuriya.
Haddaba isa-soo dhaweynta labada Kuuriya iyo sida ay wax u socdaan ayaa khubarada arrimaha gobolku waxay leeyihiin diblomasiyadan siyaasadda ma aha mid soo af-jaraysa xiisadda gobolka.
6 arrimood oo la yaab leh oo laga ogaaday wiilkii 21-ka qof ku dilay Mareykanka
Codka sirta ah ee laga duubay madaxweynaha Jabuuti ee madax sare ay xabsi ku muteysteen
Habeenkii ay kulmeen 'Taliye Shub' iyo Fahad Yaasiin iyo sheekadii dhex martay